Raisul wasaare ku xigeenka soomaliya ayaa shir gudoomiyey shirka hormarinta tubaha arimaha bulshada.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya (XFS) mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa maanta guddoomiyay shir ay yeesheen guddi hoosaadka golaha wasiirrada ee tubta horumarinta […]
Sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay dawladda Soomaaliya sidda ay shaacisay Hay’adda Nabad suggida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed. Sarkaalkan ayaa […]
Xilli shalay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, guddoomiyay shir amniga looga hadlayo oo ka dhacay magaalada Cadaado ayaa qodobadii ka […]
Kooxda shabaab oo dagaal culus ka dhex bilowdey dhexdoodana weerar isku ah.
Dagaal Khasaaro gaystay oo u dhaxeeyay maleeshiyaad ka wada tirsan Argagixisada Al-Shabaab ayaa wuxuu ka dhacay degmada Jilib ee Gobalka Jubbada Dhexe. Dagaalkaan ayaa inta […]
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa xalay iyo maanta waxa uu magaalada Cadaado kulamo wadatashi ah kula yeeshay qaar kamid ah […]
Dowladda soomaliya ayaa gebi ahaanba beenisay in somaliland iyo somaliya wadahadalo ku dhexmarayo kenya.
Dowladda Soomaaliya, ayaa sheegtay inaysan jirin Wa jirin wadahadallo Soomaaliland kula yeelaneyso Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya. Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya, Dr; Nuur Diiriye Fursade, ayaa […]
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay Danjireyaasha cusub ee dalalka Austria iyo Canada ee Soomaaliya. Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka […]
Madaxweyne erdogan ayaa codkiisa ka dhiibtey doorashada ku celiska ah ee magaalads istanbul.
Madaxweyne Rajab Dayib Erdogan oo ay wehliso Xaaskiisa waxa uu maanta codkiisa ka dhiibtay Doorashadda Ku-celiska ee Duqa magaalladda Labaad ee ugu weyn dalkaasi ee […]
Raisul wasaaraha dalka ethobia ayaa xaqiijiyey in la toogtey taliyihii ciidamada difaaca itoobiya.
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada Difaaca ee dalkiisa la toogtay iyadoo uu qalalaaso ka taagan yahay gobolka Waqooyi ee Amxaarada. […]
Ciidanka Danab ee Xoogga Dalka ayaa saakay argaggixisada Alshabaab kala wareegay deegaanno hor leh oo hoostaga Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidanka Danab […]